ती देवनारायण चौधरी र यी स्वर्णधारी खेलाडीका नाममा – " सुलभ खबर "
तेह्रौं साग खेलको कुम्भमेला मंगलबार साँझ सकिएको छ। यस प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीको सानदार प्रदर्शनको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ।५१ स्वर्णसहित २०६ पदक जितेको नेपाल पदक तालिकामा दोस्रो भएको छ।
कति खेलाडी त पूरानै ट्रयाकसुटमा मार्च पास्ट गर्दै थिए। अन्य सुविधा र व्यवस्थापकीय कुरा त छँदैछ।तेक्वान्दोमा स्वर्ण जित्ने सुनिता महर्जनका बुवा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बगैँचामा मालीको काम गर्थे, जोसँग छोरीलाई डाइटको किन्ने पैसा थिएन। कोइरालाले कहिलेकाहीँ छोराछोरीलाई मिठाइ किनिदिनू भन्दै दिएको पैसा जोगाएर उनी डाइट किन्न छोरीलाई दिन्थे।
जुडोमा स्वर्ण जितेकी पुनम श्रेष्ठकी आमाले अरूको घरमा भाडा माझेर छोरीहरूलाई पढाइन्।उनकी दिदीले विदेश गएर कमाएको पैसाले जग्गा किनेकी छन्। स्वर्णबाट पाउने पैसा थपेर त्यही जग्गामा घर बनाउने पुनमको सोच छ।
एउटा दृष्टान्त- सन् १९९३ मा बंगलादेशको ढाकामा साफ गेम भइरहेको थियो, नेपालले कुनै पनि खेलमा स्वर्ण प्राप्त गर्न सकेको थिएन। अन्तिम दिन फुटबल फाइनल खेल हुँदैथ्यो, जसमा नेपाल भारतसँग भिड्दै थियो। सबैको कामना त्यसमा स्वर्ण जिते हुन्थ्यो भन्ने थियो। फाइनल खेलको अन्तअन्त पुग्न लाग्दा पनि स्कोर बराबरीमै थियो। यस्तैमा खेल सकिन एक मिनेट बाँकी रहँदा भारतका खेलाडी बाबुमनिले नेपाली गोलरक्षक
उपेन्द्रमान सिंहलाई बिट गरेर बल नेपाली पोस्टमा पुर्‍याइसकेका थिए। त्यही बेला चितुवा सरी बेगमा आएर देवनारायण चौधरीले त्यो बल क्लियर गरे। नेपाललाई थप गोल खाएन। केही सेकेन्डमा रेफ्रीले खेल समय सकिएको सिट्ठी फुके। त्यतिखेर हामी पुलिस इन्स्पेक्टरको बेसिक ट्रेनिङ गर्दै थियो। पुलिस एकेडेमीको ब्यारेकमा बसेर टिभीमा देवनारायण चौधरीले बल बचाएर देशको इज्जत जोगाएको दृश्यले भक्कानिएको क्षण अझै सम्झन्छु।
अहिले पनि देशको लागि खेलेर पदक थाप्नेहरूको नियति त्यस्तै त हुँदैन? भन्ने प्रश्न यथावत् छ भनिन्छ- देशले के दिन्छभन्दा पनि देशलाई के दिन सकिन्छ? भन्ने सोच्नु। त्यो एउटा नागरिकको कर्तव्य पनि हो।तर खेलाडी नागरिकमात्र नभएर देशको गहना पनि हो, जसले देशको चिनारी नै बदलिदिन सक्छ।
जमैका भन्ने सानो क्यारेबियन टापुलाई संसारमा धेरै कमले चिन्दथे, तर १०० मिटर दौडका रेकर्डधारी बोल्टले संसारमा जमैकालाई यसरी चिनाइदिए की जमैका’ भन्ने राष्ट्रको नाम नसुन्ने खेलप्रेमी बिरलै होलान्।